I-Krete, Greece - World Tourism Portal
Izindawo ezivikelwe imvelo
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseCrete
Bukela ividiyo mayelana neKrethe
Sijoyine ukuhlola i-Krethe kuphela ukuthola ukuthi iKrethe limane linakho konke!
IKrethe liyisiqhingi esikhulu kunazo zonke Greece, futhi kungokwesihlanu ngobukhulu oLwandle iMedithera. Lapha, ungathokozela izinsalela zezimpucuko ezinhle, ubone amabhishi akhazimulayo, izindawo ezihehayo zezintaba ezivundile nemifudlana emigwaqweni, futhi ube yingxenye yesiko lokudla okuphezulu kwesiqhingi. I-Crete,, indawo yonke encane egcwele ubuhle nobungqabavu okungenzeka ukuthi uyodinga isikhathi sokuphila ukuze uyambule.
Inganekwane ithi eCrete Zeus, ecashile njengenkunzi, bathatha i-Europa ukuze bajabulele uthando lwabo bendawonye. Inyunyana yabo yazala indodana, uMinos, owabusa iKrethe futhi waphenduka umbuso onamandla weziqhingi olwandle. Ngezikhathi zeMinoan, ngisho ne-Attica yayizokhokha intela yentela kuKrethe, kuze kube yilapho uThemes, isikhulu sase-Athene, ebulala uMinotaur. Igama elithi “Minoan” libhekisela eNKOSINI yaseMonos yaseKnossos eyinganekwane.
Iqiniso elilandela le nsumansumane ubukhona bombuso onamandla futhi ocebile kanye nempucuko ebhekwa njengeyidala kunayo yonke ezwenikazi laseYurophu.
Izicucu zezinyawo zatholakala zishiywe ngumuntu wasendulo i-5,600,000 eminyakeni edlule.
Ubufakazi bethuluzi lamatshe bukhombisa ukuthi ama-Hominids azinza eCrete okungenani iminyaka engu-130,000 edlule. Ubufakazi bezinsuku zokuqala zokuba khona komuntu zesikhathi sabantu kwe-10,000-12,000bc. Ubufakazi obudala bokuhlala kwabantu besimanje eCretete wukuhlala komphakathi wama-Neolithic ukulima-komphakathi okuhlala kungu-7000 BC.
Ngo-1450 BC waphinda futhi e-1400 BC i-Minoan Civilization yacekelwa phansi ngokulandelana kungenzeka ngenxa yokuqhuma kwentaba-mlilo yaseThera futhi ekugcineni kwaholelwa ekwehleni kwayo. Ekuvukeni kwencithakalo amaDorians afika azohlala kulesi siqhingi. Kamuva kwalandelwa amaRoma. Ngemuva kokubusa kwamaRoma, iKrethe iba yisifundazwe saseByzantium kuze kufike ama-Arabhu athatha lesi siqhingi iminyaka eyikhulu (824-961 BC). Ngesikhathi kubuswa ama-Arabhu, uKrethe waba ngumphangi wabaphangi ababephume Heraklion wanamuhla.
Okulandelayo, i-Krethe yawa ngaphansi kokubusa kweByzantine futhi kuze kufike ukufika kwabantu baseVenetians ababehlala kulesi siqhingi cishe iminyaka engamakhulu amane ye-5 beshiya isitembu sabo esikweni lesiqhingi. Ngemuva kokuwa kukaChandakas e-1669, umsebenzi waseTurkey waqala ukumakwa ngeziphithiphithi ezinonya nezinegazi. Ekupheleni kwe-19th ukubusa kweTurkey kwaphela. UMbuso waseCretan wadalwa nenkosi yaseGrisi njengoKhomishani Ophakeme walesi siqhingi. Ku-1913, uKrethe ekugcineni wajoyinwa ngokusemthethweni Greece.
UKrethe wenza ingxenye ebalulekile yomnotho namagugu amasiko eGreece, ngenkathi egcina izimfanelo zamasiko endawo (okufana nezinkondlo nomculo wakhe).
I-Kreta inezinkondlo zayo ezihlukile zeMantinades nemidanso eminingi yendabuko, okuphawuleka kakhulu kuyo yiPentozali, futhi inentuthuko ethuthuke kakhulu, efundile yokufunda nokubhala. Ababhali beCretan benze umnikelo obalulekile ezincwadini zamaGrikhi.
Onke amadolobha amahle, ayahlaba umxhwele futhi kufanele akuvakashelwe
I-Krethe iyintaba, futhi umlingiswa wayo uchazwa uhla lwezintaba eziphakeme ezisuka entshonalanga ziye empumalanga, ezakhiwe ngamaqembu amathathu ahlukene wezintaba:
Lesi siqhingi sinama-gorges amaningana, njengokuthi
Kunezindawo eziningi zokuvikela imvelo. Enye yaleyo ndawo isesiqhingini i-Elafonisi ogwini oluseningizimu nentshonalanga yeKrethe. Ihlathi lesundu leVai empumalanga yeKrete kanye nama Dionisades anempilo yezilwane nezitshalo ezahlukahlukene. I-Vai inebhishi lesundu futhi ihlathi elikhulu lemvelo lesundu eYurophu. Isiqhingi saseChrysi, sinamahlathi amakhulu kakhulu emvelo akhula ngeJuniperous macrocarpa eYurophu.
ISamariya Gorge iyindawo yokugcina imvelo yomhlaba kanti iRichis gorge ivikelekile ngokuhlukahlukana kwendawo yayo.
UKnutoss wayeyisikhungo esivelele kunazo zonke seMinoan Civilization, esinye sezimpucuko ezinhle kakhulu zohlobo lomuntu. Abadumile idolobha lasendulo nendlu yesigodlo iyindawo enkulu kunazo zonke futhi evamile kakhulu yemivubukulo eyake yatholakala kuCrete. Ngokwesiko, kwakuyisihlalo senkosi edumile uMinoa. Ngaphandle kokuba yindawo yokuhlala yomndeni wasebukhosini, bekubuye kube yisikhungo sokuphatha nesenkolo kuyo yonke le ndawo. Isigodlo futhi sixhumene nezinganekwane ezivusa amadlingozi, njengensumansumane kaLabyrinth ngeMinotaur, nendaba kaDaedalus ne-Icarus.
Yayakhiwe ngezigaba ezimbili, okokuqala nge-1900 BC bese kuba nge-1700-1450 BC futhi ithatha indawo eyi-22,000 sq. M. Ungena enkantolo ephakathi ngomnyango oseningizimu. Ube esehlangana namaphiko amathathu. Igumbi lesihlalo sobukhosi lisendaweni ephakeme entshonalanga.
Iphiko lasempumalanga liqukethe amakamelo wasebukhosini, igumbi lama-axes eliphindwe kabili, i-megaron yendlovukazi ene-dolphin frescos, izindawo zokusebenzela - lapho indawo yokusebenzela yabakhi bamatshe ibamba indawo evelele - namakamelo okugcina kuwo. Emnyango ongasenyakatho kunendlu yangokwezifiso enezinsika nezinsika. ENorth West engaphandle kwesigodlo kukhona imicengezi enemibala, yaseshashalazini kanye nomgwaqo wasebukhosini oholela esigodlweni esincane. Ngasenyakatho-mpumalanga yesigodlo esikhulu ungavakashela i-villa yasebukhosini kanye ne-1 km ngaphesheya eningizimu yithuna lasebukhosini.
ICrete inezindawo ezimbili zezulu, iMedithera kanye neNyakatho Afrika.
Umphakathi wamaCretan waziwa kakhulu ngomndeni odumile kanye nama-clan vendettas aqhubeka kulesi siqhingi kuze kube manje. AmaCretan futhi anisiko lokugcina izibhamu ekhaya, isiko elivela esikhathini sokumelana noMbuso Wase-Ottoman. Cishe yonke imizi esezindaweni zasemakhaya eCrete okungenani inesibhamu esisodwa esingabhalisiwe. Izibhamu zilawulwa yimithetho eqinile evela kuhulumeni wamaGrikhi, futhi eminyakeni yamuva kwenziwa umzamo omkhulu wokulawula izibhamu eCrete ngamaphoyisa amaGrikhi, kodwa ngempumelelo engalinganiselwe. Lapho uzizwa unamandla futhi ufuna ukuhlola i-Krethe namagugu ayo afihliwe gcina lokho engqondweni nakuba iningi labantu linomusa omkhulu kakhulu.